Oppo A5s Blue (3GB/32GB)-16 ~ ICT.com.mm
Apologies! Limited delivery & services...
The #1 Online Tech Retailer in Myanmar. မြန်မာနိုင်ငံ၏ #၁ အိုင်စီတီ အွန်လိုင်းစတိုး။
Getaquote, sell with us or dropaline. CONTACT Read our five-stars reviews! TESTIMONIALS 0977 055 6888
HomeOppo A5s Blue (3GB/32GB)-16
Over3hundred thousand K.
Brand new products only.
If items are damaged.
4-32 hours for downtown YGN & 1-5 days for the rest
Serving customers:7- 1AM. Hotline: 0977 055 6888
Oppo A5s Blue (3GB/32GB)-16
Display: 6.22″ HD+Waterdrop Display Resolution: 720 × 1520 pixel (271 ppi density) CPU: Octa-Core up to 2.3GHz Chipset: Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Memory:3GB (RAM) Internal Storage: 32 GB (ROM)... [Learn more]
Brand: OppoSKU: 154678N/ASee more: Mobile Phones, New Arrivals, Oppo, Products, ShopFilter by: Smartphones
Display: 6.22″ HD+Waterdrop Display
Resolution: 720 × 1520 pixel (271 ppi density)
CPU: Octa-Core up to 2.3GHz
Chipset: Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm)
Memory:3GB (RAM)
Internal Storage: 32 GB (ROM)
Rear Camera: 13MP+2MP
Front Camera: 8MP + AI Beauty
Sensors: Fingerprint (rear-mounted), Accelerometer,Proximity,Compass
Battery: 4230 mAh Non-removalbe Li-Ion
Oppo A5s က စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ Oppo ရဲ့ ‘Entry Level’ အဆင့် စမတ်ဖုန်းသစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည်ပိုင်းမှာ ရှေ့မျက်နှာပြင်အတွက် Corning Gorilla Glass3ကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး ဘေးဘောင်နဲ့ နောက်ကျောဘက်အတွက် Plastic ကိုယ်ထည်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 6.22” နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အတွင်းမှန်အတွက် S-IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Resolution အားဖြင့် 720 x 1520 pixels (~271 ppi density) ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ထွက်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ OS အဖြစ် Android 8.1 (Oreo) နဲ့ မောင်းနှင်ပေးထားပြီး User Interface အဖြစ် ColorOS 5.2 နဲ့ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ System ပိုင်းအတွက် Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipset နဲ့အတူ 2.3GHz Cortex-A53 Octa-core Processor ကို တွဲဖက်တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းအတွက်ကိုတော့ PowerVR GE8320 ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ပုံမှန် Facebook, Viber တို့လို Apps တွေကို အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Family Game လေးတွေကို ကစားနိုင်ပါတယ်။ Internal Storage – 32GB ဖြစ်ပြီး MicroSD ကတ်ပေါက် သီးသန့်ပါဝင်တဲ့အတွက် Storage ထပ်မံတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ RAM 3GB ဖြစ်တဲ့အတွက် ဂိမ်းအမြင့်ကြီးတွေကို ကစားလို့မရဘဲ ပုံမှန် Apps တွေကိုပဲ တပြိုင်နက် အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကျောကင်မရာအတွက် 13MP + 2MP (depth) စုစုပေါင်း ကင်မရာနှစ်လုံးကို တပ်ဆင်ထားပြီး HDR နဲ့ Panorama တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးထားတာကြောင့် ရုပ်ထွက်ကြည်လင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ Selfie ကင်မရာအဖြစ် 8MP Selfie ကင်မရာကို တပ်ဆင်ထားပြီး HDR ကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ AI ပါဝင်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့ Selfie ပုံတွေကို စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်နိုင်ဦးမှာပါ။ Fingerprint ကို နောက်ကျောဘက်မှာ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဘတ္ထရီအတွက် microUSB 2.0 နဲ့အားသွင်းရတဲ့ 4230mAh ဘတ္ထရီအမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း တစ်နှစ် ပါဝင်ပါတယ်။
Likeadiamond lasts forever, OPPO A5s features four classic colors, Red, Black, Gold and Green. It brings out your inner artistic temperament.
Capture Every Precious Moment
With the amazing depth-of-field bokeh effect, this is the right camera for your perfect portraits. Take the spectacular photos with an ease.
Personalize Your Photo
Show your personality with more choice of AR stickers and add more fun to your chats.Based on the advanced AI technology and deep learning about you, we bring the most nature selfie to you after accurately analysis and adjustment.
With the upgraded CPU, you can multi task, play games or run any heavy task without worrying about the operation speed which ensure youaseamless response time.
Total price:K285,900 K269,100
This item: Oppo A5s Blue (3GB/32GB)-16 K189,900
UGREEN 18W USB Type C Quick PD 3.0 Fast Charger CD137-60449 (White)... K12,000 K7,200
STAR UPS 650VA (Plastic) K39,000 K36,000
Aoni 1080p FHD Webcam Camera With Built-in HD Microphone C33 K45,000 K36,000
369 Laydaungkan Road
+95 977 055 6888
For special promotion & important updates only.
Copyright © 2021 ICT.com.mm